IHS: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိမ်ဘုန်း LLC-ပရိဘောဂ & ပို
"အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ House ဘုန်း LLC ကို AT WE ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်ဆက်နွယ်ကြသည်မဟုတ်, WE ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်နှင့်လူ့ချည်နှောင်ကြသည်!" ကျနော်တို့ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ဘက်စျေးနှုန်းများ Beats လိမ့်မည် !!! အခမဲ့စျေး Quotes !! ကြှနျုပျတို့သညျဤအွန်လိုင်းပရိဘောဂအရောင်းဆိုင် & IHS အပေါ်ရောင်းချရန်အားလုံးအွန်လိုင်းနေအိမ်ထုတ်ကုန်အပေါ်အမေရိကန်နိုင်ငံအခမဲ့ရေကြောင်းရရှိနိုင်အွန်လိုင်းငွေကြေးရှိပါတယ် !!! ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုမှာ charitywater.org နှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးလိုအပ်နေသောူပည်သူအတွက်ပြည်သူ့ရန်သန့်ရှင်းသောရေ Give မှလှူဒါန်းခဲ့ခြင်းဖြင့်ကြီးမြတ်တဲ့အကြောင်းမှ Give !!! ဒီမှာ START ။ Splendid မူလစာမျက်နှာ။
ဆိုင်းအင်လုပ်ခြင်း or အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးသည်
ပရိုမိုးရှင်း / Specials (ယူအက်စ်အေအပါအဝင် Services 25 နိုင်ငံများ) နှင့်အတူလူနေအိမ် & စီးပွားရေးန်ဆောင်မှုများ !!!
DFW တက္ကဆက်ပြည်နယ်, in-အိမ်ပရိဘောဂ Delivery / ညီလာခံ
လူနေအိမ်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ IHS Real Estate Group မှ JOIN ရန် DFW တက္ကဆက်ပြည်နယ်, အမေရိကန်, အတွက်လိုအပျ !!!
ကျနော်တို့ DFW, USA တွင်တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွင်းရှိအိမ်များကိုဝယ် !!!
ကျနော်တို့ရောင်းဒဏ်ငွေအရည်အသွေးပရိဘောဂ Catalog ထုတ်ကုန်များ
$ 300 အီလက်ထရောနစ်လက်အောက်တွင် !!! အခမဲ့ပို့ပေးသည်!!!
$ 100 အိမ်ထုတ်ကုန်များလက်အောက်တွင် !!! အခမဲ့ပို့ပေးသည်!!!
$ 200 အမျိုးသမီးရဲ့ဖက်ရှင်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများလက်အောက်တွင် !!! အခမဲ့ပို့ပေးသည်!!!
$ 200 အမျိုးသားများရဲ့ဖက်ရှင်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများလက်အောက်တွင် !!! အခမဲ့ပို့ပေးသည်!!!
အားလုံး Catalog Links များ & ဖော်ပြချက် View
IHS Affiliate Program ကို
*** မှတ်ချက်ဤ catalog LINK အမှတ်တံဆိပ်သင်ကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေဝယျစေ, SO အများကြီးအဘို့, နဲ့အတူအမေရိကန် CONTACT မည်မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းအမည်နှင့်ပရိဘောဂ BRAND (ဥပမာ: CASSONI ပရိဘောဂ) (ယူအက်စ်အေ FOR) သင်တို့မြို့များနဲ့ BRAND, ပြည်နယ် & ဇစ်ကုဒ်အမေရိကန် FROM မှတစ်ဦးကပိုမိုတိကျ Quote Splendid Quote FOR !!! ***
*** ဤ catalog Links များထုတ်ကုန်များမဆိုအခမဲ့ PRICE သည် Quote FOR အမေရိကန် CONTACT !!! ***
*** ထပ်မှတ်စု: ကုန်ပစ္စည်းအမည်နှင့်ပရိဘောဂ BRAND (ဥပမာ: CASSONI ပရိဘောဂ) ထောက်ပံ့ပေးပါတစ်ဦးကပိုမိုတိကျ Quote FOR, (ယူအက်စ်အေ FOR) သင်တို့မြို့များနဲ့ BRAND, ပြည်နယ် & ဇစ်ကုဒ် ***
ကြည့်ရန် Cassoni ပရိဘောဂနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဝဘ်ဆိုဒ် Catalog / စုစည်းမှုများမှဒီနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ
သငျသညျဖြစ်လိုပါလိမ့်မယ်ဘာမှမသင်ရှာလိုလျှင်အနိမ့်ယှဉ်ပြိုင်ကိုးကားသည်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်စျေးနှုန်းကိုက်ညီသို့မဟုတ်ရိုက်နှက်ပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးပြုပြီး; ကာမရသငျသညျကိုကြိုက်လိမ့်မယ် catalog ထုတ်ကုန်အရေအတွက်အားအီးမေးလ်ပို့ပါ အခမဲ့ နောက်ကျောကိုအမှသင်၏အီးမေးလ်ကနေကိုးကား:
info@ihs-furniture.com OR ဝဘ်စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်ပေါ်ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ tab ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
ခေတ်ပြိုင်- ဧည့်ခန်း, dinning အခန်းတစ်ခန်း, ကြေးမုံ, အိပ်ခန်း, ရုံး, အထွေထွေ, မိုးလုံလေလုံအလင်း, ပရိဘောဂ
အသွင်ကူးပြောင်းရေး- ဧည့်ခန်းလေးအတွက်အသင့်တော်တဲ့အခန်း, ကြေးမုံ, အိပ်ခန်း, ရုံး, အထွေထွေ
Glamour- Living အခန်းတစ်ခန်း, ထမင်းစားခန်း, ကြေးမုံ, အိပ်ခန်း, ရုံး, အထွေထွေ
ခေတ်သစ်- မျက်နှာကျက်မီးခွက်, chandeliers & ရပ်ဆိုင်းမှုမီးခွက်, မြို့ရိုးကိုမီးခွက် & sconces, စားပွဲပေါ်မှာမီးခွက်, ကြမ်းပြင်မီးခွက်
ခေတ်ပြိုင်- မျက်နှာကျက်မီးခွက်, chandeliers & ရပ်ဆိုင်းမှုမီးခွက်, မြို့ရိုးကိုမီးခွက် & sconces, စားပွဲပေါ်မှာမီးခွက်, ကြမ်းပြင်မီးခွက်, စီးပွားရေးကျဆင်းမှု Lamps
Glamour- မျက်နှာကျက်မီးခွက်, chandeliers & ရပ်ဆိုင်းမှုမီးခွက်, မြို့ရိုးကိုမီးခွက် & sconces, စားပွဲပေါ်မှာမီးခွက်, ကြမ်းပြင်မီးခွက်
Murano ခေတ်ပြိုင်- မျက်နှာကျက်မီးခွက်, chandeliers & ရပ်ဆိုင်းမှုမီးခွက်, မြို့ရိုးကိုမီးခွက် & sconces, စားပွဲပေါ်မှာမီးခွက်, ကြမ်းပြင်မီးခွက်
Murano Tranditional- မျက်နှာကျက်မီးခွက်, chandeliers & ရပ်ဆိုင်းမှုမီးခွက်, မြို့ရိုးကိုမီးခွက် & sconces, စားပွဲပေါ်မှာမီးခွက်, ကြမ်းပြင်မီးခွက်
Living ဧရိယာ- ကော်ဖီစားပွဲ & ဘက်စားပွဲ, Lounge ကုလားထိုင်, အော်တိုမန်ခေတ် & ခုံတန်းရှည်, ဆိုဖာ & အပိုင်း
ထမင်းစားခန်းဧရိယာ- ဘားမစင် & Counterstools, ဘားစားပွဲ, bistrot စားပွဲ, ကုလားထိုင် & လက်တင်ကုလားထိုင်, တိုးချဲ့စားပွဲ, fixed စားပွဲ
ရေကူးကန်ဧရိယာ- ကြိုးပုခက်, Loungers, ဘက်စားပွဲ
သက်ရောက်စေပရိဘောဂ- Barstools & တန်ပြန်ထိုင်ခုံလုပ်ဖို့, ဘားဇယား, Bistrot စားပွဲ, ကုလားထိုင် & လက်တင်ကုလားထိုင်, ကော်ဖီစားပွဲ & ဘက်စားပွဲ, fixed စားပွဲ, Lounge ကုလားထိုင်, loungers, အော်တိုမန်ခေတ် & ခုံတန်းရှည်, အိုး & စိုက်ပျိုး, ဘေးထွက်ပျဉ်ပြား & ဗီရို, ဆိုဖာ & အပိုင်း
အလင်းရောင်- chandeliers & ရပ်ဆိုင်းမှုမီးခွက်, ကြမ်းပြင်မီးခွက်, စားပွဲပေါ်မှာမီးခွက်, မြို့ရိုးကိုမီးခွက် & scones
အမျိုးမျိုးစုပေါင်းသော- ဖြည့်စွတ်, တကွတဲ & ရှုခင်းကြည့်အဆောက်အအုံငယ်, post ကို & စိုက်ပျိုး, ကျောဇော, ထီး & sunshades
အမရေိ 2018-2019 Catalog ၏ပရိဘောဂ View မှဒီနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ
အိပ်ရာညဉ့်အခါရပ်တည်ချက်, ခုတျ & မှန်, ရင်ဘတ်, မီဒီယာရင်ဘတ်, ဦးခေါင်းဘုတ်အဖွဲ့, မွေ့ရာ, အိပ်ရာဘောင်
အိပ်ရာ, ဉျြးကဉျြးအိပ်ရာ, daybed ညဉ့်အခါရပ်တည်ချက်, ခုတျ & မှန်, ရင်ဘတ် & ဆက်စပ်ပစ္စည်း, စားပွဲ, headboard
ထမင်းစားခန်းစားပွဲပေါ်မှာ, ထမင်းစားခန်းကုလားထိုင် & Bench, Curio & Hutch Buffett, server ကို
ဆိုဖာ, ထိုင်ခုံ, ကုလားထိုင်, ပုဒ်မ, အနှစ်သက်ဆုံး, ဖူတုံအိပ်ရာ, ကော်ဖီစားပွဲ, ရုပ်သံ console ကိုကိုချစ်
ဆိုဖာ & အပိုင်း, ကုလားထိုင် & Bench, ရံအလုပ်သဘောညစာအသုံးအဆောင်
ဝဲကုလားထိုင်, အနှစ်သက်ဆုံး, ခုံတန်းလျား & Ottoman, အပန်းဖြေ, စားပွဲပေါ်မှာ & ရပ်, ရုံး & Desk, ဘား, Vanity, ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း & သိမ်းဆည်းခြင်း, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အိမ်, ကော်ဇော & ခေါင်းအုံး, Lighting & အသုံးအဆောင်
မွေ့ရာ, အိပ်ရာဘောင်, ခေါင်းအုံး
Acme ဝက်ဘ်ဆိုက် 2018 Catalogs / စုစည်းမှုများ View ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
Chelmsford စုဆောင်းခြင်း, Azis စုစည်းမှု, Vendomell စုဆောင်းခြင်း, ဗာဆိုင်းစုဆောင်းခြင်း, Vendome စုစည်းမှု, Dresden မှငွေကောက်ခံ, Chantelle စုစည်းမှု, Anondale စုစည်းမှု
မာစတာအိပ်ခန်း, လူငယ်အိပ်ခန်း, ကုတင် & ဌာနမှူးဘုတ်အဖွဲ့, ဉျြးကဉျြးကုတင်, ညတစ်ခွင်, နေ့ကုတင် & Trundles, မွေ့ယာ & ခေါင်းအုံး, Bedrails, ဗီရို
တရားဝင်အလုပ်သဘောညစာ, ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအလုပ်သဘောညစာ, ဘေးထွက်များရှိ, ကောင်တာအမြင့်, ဘား & မစင်, ကောင်တာသဘာပတိမီးဖိုချောင်လှည်း, ဝန်ကြီးအဖွဲ့
ဆိုဖာ, ပုဒ်မ, ဆိုဖာအိပ်ပျော်, အနှစ်သက်ဆုံး, ဖူတုံအိပ်ရာ & Adjustments ဆိုဖာခုံ, မီဒီယာ & တီဗီသိုလှောင်, Occaisonal စားပွဲတင်, Bench & အော်တိုမန်ခေတ်, လူငယ်ပရိဘောဂ
desk & များရှိ, စင် & သိုလှောင်ဆင်
ဝဲသဘာပတိကြေးမုံ, နာရီ, curio, console ကိုစားပွဲ, အနတ္တ, လက်ဝတ်ရတနာ Armoire, စုပ်ဗီဒို, သစ်သားမျက်နှာပြင်မီး, အင်္ကျီကိုထိန်သိမ်း, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အိမ်သူအိမ်သား
Homey ဒီဇိုင်း 2018-2019 ဝက်ဘ်ဆိုက် Catalog View မှဒီနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ
ဧည့်ခန်း, အိပ်ခန်း, ထမင်းစားခန်း, accents ကုလားထိုင်, ကော်ဖီစားပွဲ, Console TABLE, တွဲဖက်ပစ္စည်းများ
အွန်လိုင်းကြည့်ရှု 2018 သရဖူ, Mark ဝက်ဘ်ဆိုက် Catalogs ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
အိပ်ခန်းအစုံ, ဖူတုံအိပ်ရာ daybed, headboard အပေါင်းတို့, အိပ်ခန်း
ထမင်းစားခန်းအမြင့်အဖွဲ့များ, ကောင်တာအမြင့်အဖွဲ့များ, Barstools / အစုံ, အားလုံးထမင်းစားခန်း
ကော့တေးအဖွဲ့များ, Entertainment ကယူနစ်, အားလုံး Living အခန်း
မီးခွက်, ဘုံဘေဆက်စပ်ပစ္စည်း, အားလုံးဆက်စပ်ပစ္စည်း
အွန်လိုင်းကြည့်ရှု 2018 Coaster Fine ပရိဘောဂဝက်ဘ်ဆိုက် Catalogs / စုစည်းမှုများမှဒီနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ
2019 အိပ်ခန်း catalog
2019 ဧည့်ခန်း catalog
2019 ထမင်းစားခန်း catalog
2019 ရုံး & accents catalog
2019 Scott သကျရှငျ catalog
အွန်လိုင်းကြည့်ရှု 2018 Crafton ပရိဘောဂဝက်ဘ်ဆိုက် Catalogs / စုစည်းမှုများမှဒီနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ
ခေတ်သစ်မူလစာမျက်နှာပရိဘောဂရရှိနိုင်သောအွန်လိုင်းဘဏ္ဍာရေးနှင့်အတူဒီအွန်လိုင်းပရိဘောဂအရောင်းဆိုင်မှာတှေ့ရှိနိုငျ; ကျနော်တို့အွန်လိုင်းအခမဲ့သင်္ဘောနှင့်အတူဒီအွန်လိုင်းပရိဘောဂအရောင်းဆိုင်မှာအားလုံးမူလစာမျက်နှာပရိဘောဂရှိသည် ဖြစ်. , ယူအက်စ်အေ .... အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသင်္ဘောနှုန်းသို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်များ, လျှောက်ထားကြဘူး။ နိုင်ငံတကာသင်္ဘောနှုန်းသို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်နောက်ထပ်သင်္ဘောအသေးစိတ်များအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိမ်ဘုန်းကိုဆက်သွယ်ပါ။
အရည်အသွေးပရိဘောဂကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိဘောဂဝယ်လက်နှင့် USA တွင်ပရိဘောဂဝယ်လက်များအတွက်သီးသန့်ပရိဘောဂအွန်လိုင်းအပါအဝင်, ဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိမ်ဘုန်း LLC (IHS) ကမ်းလှမ်းမှုကိုရဲ့ upholstered ပရိဘောဂများနှင့်ပရိဘောဂများပြုပြင်မွမ်းမံရွေးချယ်စရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းပရိဘောဂကိုးကားမှတဆင့်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိဘောဂကိုးကားသင်သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိမ်ဘုန်းရဲ့ Fine ပရိဘောဂ၏ကျန်များအတွက်ပရိဘောဂအသေးစိတ်ကြည့်ရှုခြင်းငှါ, အသားပေးကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အပြည့်အဝအသေးစိတ်အပေါ်ထို့နောက်ထုတ်ကုန် image ကို click နှိပ်တစ်ကြိမ်တွေ့နိုင်ပါသည်တစ်ခုအွန်လိုင်းပုံစံကိုတင်ပြခြင်းဖြင့်မေတ္တာရပ်ခံထားသည်။
အောက်တွင် IHS ရဲ့ Featured ကုန်ပစ္စည်း (ပရိဘောဂကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသင်ဤပရိဘောဂလက်ရာလက်သင်္ဘောကိုဂုဏ်ယူဖြစ်ပါသည် VIG ပရိဘောဂနှင့် IHS ဖွငျ့ဖွစျသညျ !!! စိတ်ကြိုက်ကူရှင်ချုပ်ပရိဘောဂထည်၏အခြား 35 အမျိုးအစားများနှင့်အတူပရိဘောဂသားရေများ 17 ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ, ကျော်ပါဝင်သည် !!! ဤသည်အများဆုံး definetely သင့်အိမ်အခန်းကိုဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများဘို့ပရိဘောဂတိုက်ဆိုင်သည့်အရောင်များကိုရပါလိမ့်မယ်တဲ့သီးသန့်ပရိဘောဂဧည့်ခန်းအစုတစ်ခုဖြစ်သည် !!!
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိမ်ဘုန်းကိုအကောင်းဆုံးအပေးအယူရှိပါတယ်; ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးပရိဘောဂအပေးအယူရှိသည်နှင့်အခြားအပရိဘောဂပြိုင်ဘက်ရိုက်နှက်ကြလိမ့်မည် သင်တန်း၏အဲဒီမှာစျေးနှုန်းများ။ ကျွန်တော်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းရှိပါကအပြင်, IHS ကျနော်တို့ရိုက်နှက်ဖို့လိုအပ်သောအရာကိုစျေးနှုန်းကိုသိပါစေ, ငါတို့သည်နိမ့်ဆုံးပရိဘောဂစျေးနှုန်းများရပါလိမ့်မယ် !!!
အင်္ဂါရပ်များသည် PRODUCT: အထည်အလိပ်အတွက်သတ်မှတ်ရန်အပါအဝင်ခေတ်သစ် Grey ကဆိုဖာခုံ, custom ကူရှင်ချုပ် / အထူးအမိန့် Options ကို !!! ပရိဘောဂအသေးစိတ် & ပရိဘောဂ Quote & FULL အသေးစိတ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Frame ပြုပြင်မွမ်းမံ Quote နဲ့တိကမြှနျအကောက်ခွန်ပရိဘောဂ Quote FOR Form ကိုဖြည်
default ခေါင်းစဉ် - အရေအတွက်
အင်္ဂါရပ်များ PRODUCT မှအထူးကူရှင်ချုပ်အမိန့်ရွေးချယ်စရာများ (1 ၏ 4)
အထူးအမိန့် (ကလူနေမှုနေရာထိုင်ခင်း fit မှဆိုဖာပိုကြီးသို့မဟုတ်သေးငယ်အောင်) ကြောင့်ထုံးစံကူရှင်ချုပ် OR Frame ကပြုပြင်မွမ်းမံရန်သင့်အားမှတင်ပို့ရန်ရှည်လျားတဲ့ကိုယူတော်မူမည်
သင်တစ်ဦးထုံးစံ Frame ကပြုပြင်မွမ်းမံရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင် Details နဲ့တိကျမှန်ကန်သော Quote အဘို့အကြှနျုပျတို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ခြေလှမ်းများကိုဖတ်နှင့်သင့်ထုံးစံ Frame ကပြုပြင်မွမ်းမံအတိုင်းအတာအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုအတွက်သားရေသားရေများနှင့်အမျိုးအစားအရောင်ကုဒ် add ရန်သေချာစေပါရန် "Quote TO ADD" ကိုနှိပ်ပါ သငျသညျအခနျးကိုအရွယ်အစားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်။
အင်္ဂါရပ်များ PRODUCT မှအထူးကူရှင်ချုပ်အမိန့်ရွေးချယ်စရာများ (2 ၏ 4)
အင်္ဂါရပ်များ PRODUCT မှအထူးကူရှင်ချုပ်အမိန့်ရွေးချယ်စရာများ (3 ၏ 4)
အင်္ဂါရပ်များ PRODUCT မှအထူးကူရှင်ချုပ်အမိန့်ရွေးချယ်စရာများ (4 ၏ 4)
17 အထည်အလိပ်အရောင်များသို့မဟုတ်အထည်အလိပ်စတိုင်ရွေးချယ်စရာရဖို့ဆက်သွယ်ရန် !!!
ကျနော်တို့ကိုသင်များအတွက်ခေတ်သစ်နေထိုင်မှု ROOM တွင်ရှိ !!! Next ကိုတက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိဘောဂစုစည်းမှုများထံမှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိမ်ဘုန်း LLC, ပရိဘောဂ & ပိုဤသားရေခေတ်သစ်ဧည့်ခန်း, အဲဒီတင့်တယ် & သားရေမော်ဒန်ဆိုဖာခုံသတ်မှတ်ရန်ပါဝင်ပါသည် !!!
အောက်တွင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ပရိဘောဂစုဆောင်းမှုထဲမှတစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်အဖြူသားရေဆိုဖာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်! ၏သင်တန်းသည်ဤအစုံရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်စုစုပေါင်း, သင်အွန်လိုင်းကဤခေတ်သစ်သားရေဆိုဖာအစုံအခမဲ့ရေကြောင်းရနိုင်ပါလိမ့်မည်! ဒါကအင်တာနေရှင်နယ်အိမ်ဘုန်းကနေအွန်လိုင်းအခမဲ့ရေကြောင်းရှိခြင်းအဘို့ကြီးသောငွေစုပဲ! သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ site သွားရောက်ကြည့်ရှုသည့်အခါ Plus အားသငျသညျ IHS ရုံကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းပရိဘောဂစတိုးဆိုင်တံခါးနားမှာဖြစ်ခြင်းများအတွက် 10% လျှော့စျေးကုဒ်ကမ်းလှမ်းကြောင်း, သတိပြုမိကြသင့်ပါတယ်! ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းပရိဘောဂစတိုးဆိုင် browsing Continue & သင်ငါတို့သည်လည်းဤနေရာတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိမ်ဘုန်းမှာသင့်အိမ်ထဲတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်သောအခြားနေအိမ်ထုတ်ကုန်ပူဇော်ထွက်ရှာတွေ့ခြင်းငှါလာကြပါလိမ့်မယ် !!! အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောင်း၏ '' အမျိုးအစားအပါအဝင်ယင်း၏သင့်လျော်သောနေအိမ်ထုတ်ကုန်ကြည့်ရှုရန်ဤအလင့်များပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ:
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်သစ်ဧည့်ခန်းအစုံကြည့်ရှုရန်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော contine !!!
သားရေမကျြမှောကျခဧည့်ခန်းလှတျမွောကျစပေုံ: (26 ရရှိနိုင်သောအထူးအမိန့်အီတလီသားရေအရောင်များ; နောက်ထပ်အင်ဖို & တိကျမှန်ကန်သော Quote သည်ဆက်သွယ်ရန် !!! ရုပ်ပုံအတွက်ကုန်ပစ္စည်းသည်ပြသည်သားရေအရောင်အဘို့အလိုလျှင်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်စျေး; Scroll Down စာမျက်နှာတချို့ကအားလုံး 26 သားရေအရောင်များ View ဖို့ & အဆိုပါအောက်တွင်သားရေမကျြမှောကျခဧည့်ခန်းဆိုသည်တစ်ဦးကကွဲပြားခြားနားသောသားရေအရောင်ရွေးချယ်ရေးတွင်နောက်ထပ်အင်ဖိုသည်ဆက်သွယ်ရန် / အပိုင်းလှတျမွောကျစပေုံ !!!)
ခေတ်သစ်က Black သားရေဆိုဖာခုံသတ်မှတ်မည်
ပုံမှန်စျေးနှုန်း $8,19000 $8,190.00
ခေတ်သစ် White ကသားရေဆိုဖာခုံသတ်မှတ်မည်
ပုံမှန်စျေးနှုန်း $7,11000 $7,110.00
*** ဒီနည်းကိုသားရေ *** ဆိုဖာလှတျမွောကျစပေုံမကျြမှောကျခဧည့်ခန်းသာသက်ဆိုင်သည်
ပရိဘောဂစုဆောင်းမှုများကျွန်ုပ်တို့၏တတိယ Up ကို, ကျနော်တို့ Splendid ပရိဘောဂများဖြစ်ပါတယ်ဒါကခေတ်သစ်အိပ်ခန်းများသို့မဟုတ် Modern အိပ်ခန်းသတ်မှတ်ပေးသည်ဖူး !!!
သငျသညျကိုအောက်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိမ်ဘုန်း LLC အရည်အသွေးမြင့်ပရိဘောဂကြောင်းအဖြူခေတ်သစ်ညစဉ်များနှင့်ခေတ်သစ်ကိုပြုစုထားပြီး !!!
ခေတ်သစ် White ကအရှေ့ကဘုရငျအိပ်ခန်းသတ်မှတ်မည်
ပုံမှန်စျေးနှုန်း $3,58000 $3,580.00
ပုံမှန်စျေးနှုန်း $3,32000 $3,320.00
ပုံမှန်စျေးနှုန်း $3,65000 $3,650.00
ခေတ်သစ် walnut အလုပ်သဘောညစာ Set
ပုံမှန်စျေးနှုန်း $3,50000 $3,500.00
ထိုမှတပါး, IHS ရောင်းအခြားအွန်လိုင်း House ထုတ်ကုန်များသင့်မူလစာမျက်နှာတွေ့သမျှသောကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်း STORE တွင် !!! သင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းစတိုးအလည်အပတ်ရောက်ရှိနေစဉ်အိုင်တီထုတ်စစ်ဆေး !!! ရရှိနိုင်အွန်လိုင်းအခမဲ့ရေကြောင်းနှင့်အွန်လိုင်း Finance !!!
အောက်တွင်ထူးခြားသောစတိုင်များသို့မဟုတ်အရည်အသွေးတွေကိုသင်အိမ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့အိမ်သူအိမ်သားထုတ်ကုန်များ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ collection များကိုပဲတချို့ရှိနေပါတယ် !!! ဤအ collection များကိုတွင်ဤထုတ်ကုန်များ၏အားလုံးအပေါ်နှင့်သင်တန်း၏, အခမဲ့သင်္ဘော !!! ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ၌ရှိကြ၏စဉ် NOW က Shopping !!!
$ 100 House ထုတ်ကုန်များအောက် !!! အခမဲ့ပို့ပေးသည်!!!
$ 300 Consumer Electronics အောက် !!! အခမဲ့ပို့ပေးသည်!!!
$ 200 အမျိုးသားဖက်ရှင် & တွဲဖက်ပစ္စည်းများအောက် !!! အခမဲ့ပို့ပေးသည်!!!
$ 200 Woman FASHION & တွဲဖက်ပစ္စည်းများအောက် !!! အခမဲ့ပို့ပေးသည်!!!
IHS ပရိဘောဂ, သတင်း, & မူလစာမျက်နှာကုန်ပစ္စည်းများမှာပြန်ကြားရေးဘလော့
IHS အတူ Be ရန်အလွန့်အလွန် Talent အီးကုန်သွယ်ရေး / ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး / ပရိဘောဂဒီဇိုင်နာတစ်ဦးချင်းလိုအပ်နေ !!!
Posted by ကို Rabah အစ္စလာမ်ဘာသာ on အောက်တိုဘာ 23, 2018
ကျွမ်းကျင်သူများကထိုအအမျိုးအစား E ကို ^2အသိပညာနှင့်အတူအီးကုန်သွယ်ရေး၏နယ်ပယ်များတွင် IHS ရေးအဖွဲ့, ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ပရိဘောဂဒီဇိုင်းနှင့်မဆိုပရိဘောဂ Related ထိပ်တန်း Notch ပုဂ္ဂိုလ်များကို Join ဖို့လိုအပ်နေ !!!! Are ...
DFW တက္ကဆက်ပြည်နယ်, IHS Real Estate Group မှကို Join ဖို့လိုအပျအမေရိကန်နိုင်ငံအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ !!!
Posted by ကို Rabah အစ္စလာမ်ဘာသာ on အောက်တိုဘာ 22, 2018
သငျသညျ DFW တက္ကဆက်ပြည်နယ်, USA တွင်အိမ်ခြံမြေ Properties ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ရှာဖွေနေပါသလား? သငျသညျကိုပြန်ထိုင်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင်တစ်ဦးသို့ပြန်သွားသည် (Roi) အတွက်စောင့်ဆိုင်းဖို့ရှိပါသလား သငျသညျ join ဖို့လိုနေကြတယ် ...
Posted by ကို Rabah အစ္စလာမ်ဘာသာ on စက်တင်ဘာ 08, 2018
ကျနော်တို့ IHS မှာ: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိမ်ဘုန်း LLC သင်၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုတဲ့ DFW တက္ကဆက်ပြည်နယ် community.If များအတွက် Showroom ဖွင့်ဖွင့်လှစ်ရန်စိတ်ဝင်စားမှုအခမဲ့စီးပွားရေးချေးငွေထုတ်ပေးရန်သို့ကြည့်မျှော်နေပါတယ် ...
အရောင်း / ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်ရန်:
Texas ပြည်နယ် Dallas, အမေရိကန်နိုင်ငံ။ : + 1 (469) 268-7376
© 2019 IHS: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိမ်ဘုန်း LLC-ပရိဘောဂ & ပို